KBZ …. ရက်စက်တယ်..လူမဆန်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » KBZ …. ရက်စက်တယ်..လူမဆန်ပါ
KBZ …. ရက်စက်တယ်..လူမဆန်ပါ
Posted by tunlinaung on Mar 23, 2012 in Think Tank | 14 comments
ကတ္တရာတွေကျိုနေတယ်ဗျာ။ နောက်ကအဆောက်မဦက မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း ခွဲစိတ်ကုသဆောင်ကြီးဗျာ။
View all posts by tunlinaung →
KBZ ဆိုတာကြီးက အကြီးကြီးဗျ …၊
လူပါးလဲ ဝ မယ်..၊
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်မှာလဲ မဟုတ်ဖူး…၊
တော်တန်ရုံ အဆင့်လောက်နဲ့ သွားပြောလဲ အလကါးပဲ…၊
ဒါကြောင့်မို့.. ခက်တယ် ခက်တယ် ပြောနေရတာပဲလေ…။
အသူရာ ရေ KBZ ဆိုတာက ကျနော်သိတာတော့ ရန်ကုန်က ကြက်ဘဲဈေး ကိုပြောတာပါခဗျ အကြီးကြီးပဲ အရမ်းညစ်ပတ်တယ်
Z ဆိုလို့ …. တက်ကြည့်ပါတယ်…
အတော် မကောင်းတဲ့ Z
ဖားသက်ပြင်းလေသံနဲ့ အဝဲနက်စ်တွေလိုတာ ။ ချဉ်ထှာအေ လို့ ရေးမယ် စိတ်ကူးတုန်းရှိသေး သူပြောသွားပြီးပြီ.။
KBZ က ကမော္ဘဇဂရုပ် ၊ ဒါကတော့လမ်းခင်းတဲ့ အဖွဲ့ ။ (ကမော္ဘဇ ရဲ့ လက်အောက်ခံ လုပ်ငန်းတစ်ခု)
အဲ . ကျွန်တော့် အတွေးပြောရရင်တော့ သတ်ိမပြုတာ။ ငါ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် သူများ တွေ အနှောက်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာ မတွေးကြတဲ့ ပြစ်မှု တစ်ခု အဖြစ်သာ မြင်ပါသည်။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုုယ်ပြီးဖို့သာ အာရုံစိုက်တတ်ကြတဲ့ အလေ့တစ်ခု ။ လူးပါးဝလိုက်မယ် ။ ဘယ်သူ့ ဂရုစိုက်ရမှာလည်း တွေးလုပ်သည်ဟုတော့ မထင်ပါ။
ဥပမာ .. ကားဘီးပေါက်ရင် အခြားကားများ သွားရခက်မယ်လို့ မတွေး လမ်းဘေး ရပ်ပြီးမှ ဘီးလဲမယ် မစဉ်စားဘဲ ပေါက်တဲ့ နေရာ ရပ် ဘီးလဲတတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးတစ်ခု ။
ကိုhtoosan ရေ KBZ ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့လူတော်တော်များများသိတယ် … မသိခြင်ထောင်ထောင်ပြီးမေးနေတာ … ကတ္တရာနံကတော့ ခိုင်ခိုင်တို့အိမ်နားမှာလည်းလမ်းခင်း နေတယ် ပြောမနေပါနဲ့တော့ … ဒါဒို့ရဲ့ပြည် ဒါဒို့ရဲ့မြေ …..
လမ်းခင်းဘို့ ကတ္တရာ ကျိုတာ ကောင်းတာလုပ်တာဘဲ ဘယ်နားလုပ်လုပ် ကိစ္စ မရှိဘူး လို့များ လှေနံဓါးထစ် ယူဆလေသလား ကိုကမော္ဘဇ ရေ…ဆေးရုံ ရှေ့ မှာတော့မလုပ်သင့်ဘူးလေ.. ဆေးရုံ အုပ်ချုပ်သူ များကလည်း လူနာတွေထဲမှာ သူ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေ မပါ လို့ဘဲလား..သက်ဆိုင်ရာ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ အဖွဲဝင်ဆိုတဲ့ လူကြီးများကကော မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြ ကိုယ်နဲ့မဆိုင် ဘာသိဘာသာ ပေါ့လေ
သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော လမ်းခင်းတဲ့ ကမော္ဘဇ က ထင် ရာစိုင်း… ပြည်သူက အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိတော့ .. နည်းမှန်လမ်းမှန် ပြောပြန်ရင်လည်း တရားခံပြန်ဖြစ် နေမယ်ထင်ပြီး ကြိတ်မှိတ်ခံ….သက်ဆိုင် ရာကလည်း ပြည်သူတွေကို ကူညီရမယ့် ကိစ္စ မှတစ်ပါး ကျန်တာအလေးထားလုပ်ကြ….အော် ကတ္တရာ မီးခိုးငွေ့ က လွင့်ပျံ့ ပျောက်သွားပေမယ့်ခေတ်ရဲ့ ကြေးမုံ ပြင် အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ ပါ
မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြ၏၊ မီဒီယာသမားလို့မရှက်မကြောက် ခံယူကြ၏၊
အမှန်ကို မဖေါ်ထုတ်ဝံ ့သူများဖြစ်ကြ၏၊ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက် လုံးလုံးမရှိ၊ သာကြီး ၏ တပဲ့များလုံးလုံး
အဲ … ခွဲစိတ်ဆောင်နားမှာ ကတ္တရာလာကြိုနေတာ ..ညှော်လိုက်မယ့်အဖြစ်ပဲ … ။
ဆေးရုံဝန်းထဲမှာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း …. ဆေးရုံအနေနဲ့ … ပြောသင့်တယ် … ။ ကြည့်ရတာ ဆေးရုံအုပ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း… တာဝန်ချိန်ခဏလောက်သာ အဲ့ဒီနားမှာ ရှိပြီး သတိမထားမိတာပဲဖြစ်ရမယ် … ။
လူနာတွေအတွေအနေနဲ့ကလည်း … ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူကို … အကျိုးကြောင်းပြောပြသင့်တယ်လို့ ထင်တာပါပဲ … ။
အောင်မယ်လေး။ အဲဒီ ကတ္တရာညှော်ကဘာနဲ့မှမတူတာ။ အနာလဲတော်တော်ကိုရင်းတာနော်။ မလွယ်ဘူး။
လူဆိုတာ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားတွေ ဒါတွေရှိလို့ပေါ်လာတာ…. မနာနဲ့…။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့အပင်ကိုပဲပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရတတ်ပါတယ်…။ သူ့လမ်းသူသွားနေတာပါ…………
ကတ္တရာဆိုတာ ဒီလို ပီပါကို ထင်းမီးနဲ့ရှို့၊ လောင်လွယ်အောင် ကတ္တရာတချို့ပါ ထည့်ရှို့ပြီး ကျိုရတာမဟုတ်ပါဘူး။
လူနေဧရိယာမှာ ကတ္တရာဖျော်ရင် နှစ်ထပ်အော်ဗင်မှာ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ ပီပါအောက်ကအပူပေးပြီး ဖျော်ရတာပါ။
လူနေဧရိယာမှာ အခုပုံထဲကလိုလုပ်တာဟာ ကျင့်ဝတ်တင်မက၊ ဥပဒေနဲ့ပါမညီပါဘူး။
သူတို့က လူနေဧရိယာလို့ မထင်လို့ဖြစ်မယ်။
လူလူချင်း လူလိုထင်ဘို့လဲ လိုသေး…တော်ရေ့……။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းခင်းတဲ့စံနစ် က ကတ္တရာလောင်းမဲ့ လမ်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရမှာပဲ ကျိုပြီး ပုံးတွေကို လက်နဲ့ သယ်လောင်းနေရတာပါ။ အဝေးကြီးမှာသွားကျိုလို့ မလွယ်ပါဘူး။ အခုကိစ္စကလည်း အလုပ်သမားတွေရဲ့မစဉ်းစားမဆင်ခြင်မှုပဲဖြစ်ပါလိ်မ့်မယ်။ ကေဘီဇက် ဆိုတဲ့အဖွဲအစည်းကြီးနဲ့တော့မဆိုင်လောက်ပါ။ ကေဘီဇက် နဲ့ ကျနော်လဲ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ပါ။